Movie StoreWar of the Arrows (2011)
HomeActionWar of the Arrows (2011)
COVID-19ကြောင့် အိမ်တွင်းအောင်းနေကြတဲ့ ချိဖချိမတို့ post ကို မြင်ပြီးတော့ မဖတ်ပဲ ကျော်သွားချင်ကြတာလား😒? ကျော်မသွားနဲ့နော်… ကုလား၅ကောင်ကို အိမ်ပါဆယ်ပို့ပြီး ကခိုင်း လိုက်မှာနော်😂
ဆက်ဖတ်လေ အောက်မှာ ရှိသေးတယ်👇
အခု ဇာတ်ကားလေးကတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ဂျိုဆွန်းခေတ် ကာလတုန်းက မန်ချူးတို့ ကိုရီးယားကို ဒုတိယအကြိမ် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ Park Hae-il, Ryu Seung-ryong and Moon Chae-won တို့က အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်…
ဂျိုဆွန်းခေတ် မန်ချူးကို ကျူကျော်ဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ နမ်ရီဆိုတဲ့ မြှားသမားလေးဟာ မန်ချူးတွေ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားတဲ့ သူ့ညီမငယ်လေး ဂျယ်အင်း ကို ဘယ်လို ကယ်တင်မလဲ? ညီမ‌ငယ်လေးအတွက် ဘယ်လိုအရာတွေကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ရမလဲ? နောက်ဆုံးမှာ သူကယ်တင်ချင်တဲ့ ညီမငယ်လေး ရန်သူတွေလက်ထဲကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား? ဆိုတာတွေကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် စောင့်ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
” War of The Arrows”ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ တစ်ကားလုံးမှာ မြှားပစ်တာတွေ အများကြီးပါတာမို့ ငယ်ငယ်က သားရေကွင်းပစ်ပီး စစ်တိုက်တမ်း ကစားခဲ့ကြဖူးတဲ့ ချိဖချိမတို့အတွက် ငယ်စဉ်ဘဝကို ပြန်လည်မြင်ယောင်မိစေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုဖို့ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးမလို့ ဆက်ဆက်ကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါစေ။